Yaanu Nahay | Golis Telecom Somalia
Golis Telecom waa shirkadda ugu ballaaran Puntland, waxay hoggaan u tahay bahda isgaarsiinta gayigaan, waxay ku jirtaa saddexda shirkadood ee ugu mudan dhanka is gaarsiinta guud ahaan Soomaaliya.
Waxaa dhidibbada loo taagay Golis sannadkii 2002dii, waxay isu xilqaantay buuxinta kaalin maran oo bulshadu baahi weyn u qabtey, waxay ka haqabtirtay bulshada noocyada adeegyada isgaarsiineed waxaase aad loogu xusuustaa adeegga (GSM-ka) oo ah habka isticmaalka taleefan gacmeedka carro edeg (caalamiga ah) oo ay shirkaddu lahayd hindisihiisa gobollada Puntland.
Golis waa shirkad ay wadaagaan saamileey (share holders) soomaaliyeed oo badan, waxaa adeegyada shirkaddu ku jaan go’anyihiin baahida dadweynaha ay u adeegto, waxay shaqo u abuurtay kumannaan dhallinyaro soomaaliyeed ah, waxay si mug leh uga qayb qaadatay koboca dhaqaalaha dalka.
Golis waxay laamo ku leedahay dhammaan magaalooyinka waaweyn iyo in badan oo ka mid ah tuulooyinka Puntland, sidoo kale waxay faracyo ku leedahay magaalooyin badan oo soomaaliyeed oo ka baxsan maamulka Puntland.
Golis ayadoo ka kooban dad badan oo kala duwan ayey misana u shaqeeyaan sidii hal qof oo kale, mudnaanteeda koowaad waa haqabtirka, qancinta & u adeegga bulshada, taasi waxay sababtay in Golis iyo macaamiisheedu noqdaan sidii hooyo iyo ubadkeed, waxaa ka dhexeeya is jacayl labada dhinac ah taas oo xaqiijisay macnaha (Affinity) oo ah is ogolaan, is jacayl iyo xigtonimo.
Golis waxay saaxiib la tahay deegaanka, waxay aad u ilaalisaa bay’ada oo waxaa astaan u ah degaan nadiif ah oo qurux badan.